Ruoko - rwakaraswa simbi pamusoro peplate Vatengi uye Fekitori - China Ruoko - rwakaraswa simbi yesimbi pamusoro peplate Vagadziri
Welcome kutishanyira kuziva zvakawanda pamusoro fekitari yedu. OEM / ODM inowanikwa: Yako logo pane chigadzirwa. Yakasarudzika chigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa ako. Chero zano rako pane chigadzirwa tinogona kukubatsira kugadzira nekupa kudhirowa. Zvimiro zvematafura edu epasi epasi pemubhedha ● Zvishandiso zvakakwirira-simba, zvakakwirira uye zvakapfigwa zvine gorosi simbi inowanika paGiredhi reGG-20, GG-25 kana GG-30 inofanirwa kusarudzwa kugadzira iyo t-slotted cast iron pasi mahwendefa. Zvimwewo zvinhu zvakaita semudhinda wakakanda simbi kana c ...
OEM / ODM inowanikwa: Yako logo pane chigadzirwa. Yakasarudzika chigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa ako. Chero zano rako pane chigadzirwa tinogona kukubatsira kugadzira nekupa kudhirowa. simbi yakakandwa Mativi matatu mutongi Tarisa kuomarara pakati pemuchina maturusi uye epamusoro-chaiwo michina (uye zvishandiso) kuongorora. mifananidzo muforoma NO. saizi (mm) BCC0028 300 * 210 BCC0029 300 * 400 BCC0030 300 * 500 BCC0031 400 * 600 BCC0032 500 * 800 BCC0033 1000 * 750 kukanda simbi Angle ndiro w ...